अलैंचीको नर्सरी | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) अलैंचीको नर्सरी
पाँचथर । २०६७/०६८ सालतिर अलैंचीको मूल्य उत्कर्षमा थियो, तर उत्पादन अत्यन्त न्यून । एकातिर अलैंची रोग लागेर थलिएको थियो भने अर्कातिर मूल्य प्रति ४० किलो रू. १ लाखभन्दा माथि पुगिसकेको थियो ।
कृषकहरू अलैंचीमा लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसकेकोमा चिन्तित थिए । यस्तैमा मेहेलबोटेका अगुवा कृषक गणेश मिश्र लगायतले अलैंचीको नर्सरी सञ्चालन गर्ने सुर कसे । २०६९ सालदेखि बिरुवा उत्पादन तथा विक्री शुरू गरेको यो नर्सरीले अहिलेसम्म करीब ४० लाख बिरुवा विक्री गरिसकेको छ ।
प्रतिगोटा रू. ५ का दरले विक्री भएका यहाँका बिरुवाले उत्पादन समेत दिन थालिसकेका छन् । साविकको जिविस तथा कृषि विकास कार्यालयले पनि नर्सरीबाट बिरुवा खरीद गरेर कृषकलाई वितरण गर्थे । मिश्रको नर्सरीले सीधै कृषकलाई मात्र नभई यस्ता सरकारी निकायलाई समेत थुप्रै अलैंचीका बिरुवा विक्री गरिसकेको छ ।
अलैंचीको फल बेचेर मात्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने मान्यताविपरीत बिरुवा बेचेरै पनि रू. २ करोडभन्दा बढीको कारोबार यस नर्सरीले गरिसकेको छ । यो वर्षसमेत २ लाख बिरुवा विक्रीको तयारी हुँदै गरेको नर्सरी सञ्चालक गणेश मिश्रले बताए । उनको नर्सरीमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने अलैंचीका सबै जात रामसाई, गोलसाई, जिर्मले, साउने र भारलाङको बिरुवा उत्पादन हुने गरेको छ ।
बजार खोज्न बंगलादेश
अलैंचीको मूल्य ओरालो लागेपछि व्यवसायीहरू चुप लागेर बसेनन् । उनीहरू संगठित रूपमा अलैंचीको गुणस्तर सुधार गर्न कृषकका घरघरमा र बजार खोज्दै बंगलादेश तथा कतारसमेत व्यवसायीहरू पुगिसकेको भन्छन्, नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष दीपक नेपाल । पछिल्लो समय नेपालको पश्चिमी भेग तथा भारतको सिक्किम, आसाममा समेत ठूलो परिमाणमा अलैंचीको उत्पादन हुन थालेपछि मूल्यमा कमी आएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।
पूर्व उपाध्यक्ष नेपाल बंगलादेशमा अलैंचीको बजार खोज्दै झोलामा अलैंची बोकेर त्यहाँ आयोजना भएको व्यापार महोत्सवमा समेत पुगेका थिए । अलैंचीको ठूलो बजार रहेको बंगलादेशले भुटानबाट आउने अलैंचीमा कर लिँदैन । तर, नेपालबाट जाने अलैंचीमा ३५ प्रतिशत कर लिन्छ । यस्ता कानूनी व्यवधानलाई सरकारी तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको मूल्यले लागत नै उठ्दैन
अलैंची उत्पादक कृषकहरू अहिलेको मूल्यले अलैंचीको लागत नै उठ्न गाह्रो हुने बताउँछन् । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अलैंची कृषक तिलविक्रम चेम्जोङले मूल्य यही अवस्था कायम रहे अलैंची खेतीको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । मूल्यमा आएको कमीले कृषकलाई प्रत्यक्ष मार परेको पाँचथर प्राङवुङ–९ का अलैंची कृषक कृष्ण ग्याङ्मी बताँउछन् । मूल्य राम्रो हुँदा पूर्वी पहाडका अधिकांश कृषकले उत्पादन गरेको अलैंची प्रायः भदौको पहिलो सातादेखि असोज अन्तिमसम्म टिपेर बजारमा पु¥याउने गरेका थिए । तर, मूल्य प्रतिदिन ओरालो लागिरहेकाले उनीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । कृषकहरू टिपेर सुकाएर विक्रीका लागि ठिक्क बनाएको अलैंचीसमेत घरमै थन्क्याएर बसेका छन् ।